Tuug caan ka ah dunida oo qalin-qori “qaali ah” ka xaday boqortooyada UK kadibna qaadatay go’aan aan laga fileyn | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Tuug caan ka ah dunida oo qalin-qori “qaali ah” ka xaday boqortooyada...
Hadda, waa qalinka ugu cansan dunida – taas ayaana macno u yeeleysa. Ma cadda, balse qalinkaa wax buu u taagan yahay.
Tuugga xaday waa qof haddaba la garanayo oo caan ah oo maamulka iyo qofkasta uu og yahay – waana Camila Cabello.
Fannanadan caanka ah, waxay sameysay geesinimo, waxayna qiratay dembiga – waxay ku dhiiratay in ay ka xado qalinka oo uu hayay Greg James oo ah soo jeediyah barnaamijka BBC Radio 1. Dhacan oo xilli maalin ah la geystay, waxaa laga fuliy qasriga Kensington kullan ka dhacayay oo abaalmarin lagu siiyay dhallinyaro ku guuleysatay tartanka barnamijka Radio 1.
Laakiin, in kastoo soo celinta qalin qorigaas ay wakhti qaadan karto, haddaba suuragal ma tahay in qiimihiisa la eego – mise waa arrin adag in la xakameeyo hadda?
“Asal ahaanta marka la eego, qalin-qorigan qiimo badan malahan,” ayuu yiri Lee – taas waxay si degdeg ah halis ugu tahay in sheekada ay sii socoto. Laakiin si wuxuu ku gelinayaa rajo.
“Balse marka taariikhdiisa la eego… waxaa suuragal ah in kumannaan dollar uu gaaro.”
“I am sorry William and I am sorry Kate” @KensingtonRoyal@GregJames may have got @Camila_Cabello into a bit of trouble at the Palace pic.twitter.com/aKArMdD04H
— BBC Radio 1 (@BBCR1) 26. november 2019
Haddaba, dib haddii aan ugu noqono qiimeynta. Qallinkan waa mid yar, oo alwaax ka sameysan, wax midib ama magac shirkad ah malahan, herkiisa waa caadi, dhowaanna waa la qoray”.
“Marka hore waxaan u baahannahay in aan cadeyno oo aan aqbalno sheekada,” ayuu yiri Lee.
“Haddii aan rumeysan nahay sheekada, taas oo dhab ah, ka dib waxaa jiro arrimo muhiim ah oo aan eegi karno. Waa inaan dhiigga hida-sidaha ka baarno – laakiin taasi waa arrin xad-dhaaf ah hadda.”
Lee wuxuu ku qanacsan yahay in lacag laga sameyn karo qalin qorigan sababtoo ah, waxaa Amiir William iyo Kate “laga jecel yahay dunida”.
Image captionLee oo qiimeynaya qalinka uu leeyahay Amiir William IV
“Shaki kuma jiro, in suuqa ay buux dhaafin doonaan qalin-qoriyaal badan oo been abuur ah oo lagu sheegi doono in ay lahaayeen Amiirka dhaxalsugaha Britain iyo xaaskiisa,” ayuu yiri Lee oo digniin bixinayay.
Saraakiisha dhismaha kama aysan hadlin in qoyska boqortooyada ay dib u eegayaan amniga qaanaddooda buugaagta. Iyadaa qirashada Camila ay ka fal celiyeen, waxayna ogeysiiyeen in ay si dhow ula socdaan…
Way ku saxan yihiin in lala socdo Camila – xatooyadan waxay albaab u noqon kartaa dembiyo kale oo halis ah oo la geysto. Waxay ku billaabatay qalin qori, balse waxa xigi kara in si lama filaan ah ay u qaadi doonto wax wayn. Ilaalada eeyaha boqoradda waxa loo sheegay in ay feejignaan dheeraad ah muujiyaan.
Haddii wax yar aan dib ugu noqono qiimaha qalinkan. Sida caadiga ah waa wax soo jiidasho leh. Waxaa jiro waxyabo kale oo madax hore ay lahaan jireen sida ra’iisul wasaarihii hore, Winston Churchill oo loo ameeyay meelo lagu iibiyo alaabtiisa.
“Haddii qalinkan la sii hayo. 50 illaa 100 sano ka dib, wuxuu yeelan doonaa qiimo sare oo ka qaalisan midka maanta.”
“Qaar ka mid ah dharkii Boqoraddii Victoria ayaa suuqa la geeyay dhowr sano ka hor. Waxaan sii iibiyay qaar ka mid ah alaabtaa – waxay gaareen $7,756 dollar (£6,000).”
Previous articleMaxow galabta Kheyre kasheegay mid kamid ah hotelada Muqdisho oo caawa siweyn loo hadal haayo
Next articleWasiir Katirsan Xukuumada Oo Amar uu soo saaray Xitaa Xafiiska Kheyre Saameynaya
Ciidamo taabacsan DFS oo howlgal saf-balaaran ka bilaabay Jubbooyinka
Baarlamaanka Hir-Shabeelle oo ka shirey dib u eegista Dastuurka dalka
Meydadka Shabaabkii Weeraray Hotelka Dusit D2 Oo Loo Qaaday Mareykanka&xog cusub oo shegeyso
Kulan Albaabada u xiran oo looga hadlay amniga oo ka dhacay degmada Maxaas
Somaliland oo xoolaha ay u dhoofineyso Cuman u daba fadhiisaneysa Puntland
Toos Udaawo:MD Farmaajo oo haatan gaaray magaalada Garoowe iyo si aan caadi ahayn oo loo soo dhaweeyay
Sucuudiga oo saddex laabay cashuurta iibka si loo kaabo dhaqaalaha dalka
Qaramada Midoobey oo soo saartay warbixin ay ka carootay Israa’iil